Ugcino lwegalelo | Iindaba ze-NAB | I-2020 I-NAB bonisa i-Media Partner kunye noMvelisi we-NAB BONISA LIVE. Iindaba zeeNjineli zoSasazo
Ikhaya » I-Tag Archives: Igalelo
Archives Tag: Igalelo
I-Globalbecast inyusa iDenis Genevois kwiQela leNtengiso yeVP kunye neOlivier Zankel kwiQela lezoNxibelelwano leVP
I-Paris, nge-3 kaJuni 2020 - I-Globalbecast, umboneleli wezisombululo kwimithombo yeendaba, uxele ukuba iDenis Genevois kunye no-Olivier Zankel bayahamba kwiindima ezintsha zokuthengisa. UGenevois, ojoyine i-Globecast ngonyaka ka-2001, ngoku uyiQela leNtengiso yeVP kwaye uZankel, ojoyine iGlobecast ngo-2011, ngoku liQela loNxibelelwano leVP. Bobabini baya kunika ingxelo kuPhilippe Bernard, u-CEO, i-Globecast, ...
Ukusasazeka kwiHlabathi liphela: ukuphucula iiplatifomu zokuSasaza ngokuCothisa okuPhantsi, uMgangatho oPhakamileyo, kunye ne-TCO esezantsi
Ukusasazeka kwiLizwe jikelele kuyilahle indlela yokuzisa isiseko sokulibaziseka esisezantsi kakhulu kwinqanaba leNdebe yeHlabathi besebenzisa iziseko ezisezantsi, ngelixa kuncitshiswa indleko eziqhelekileyo zamaqonga kunye nababoneleli beenkonzo. Itekhnoloji yokuSasaza i-Global patent kunye ne-patent-pending technology ijika nayiphi na iseva yokugcina ilifu ibe yindawo yokugcina isantya yokuhamba, ngaphandle kokufaka nayiphi na isoftware eyongezelelweyo kwiserver. Oku kwenza bukhoma, umgca, i-OTT, ...
I-Tightrope kunye ne-ENCO Yakha ubuhlakani ekuZiseni uKhuphiswano lokuZivalela oluValiweyo kwiCablecast Community Media Workflows
Izisa ngokudibeneyo kunye nokusebenza ngokukuko kweCablecast automation, playout kunye neqonga lokupapasha kunye nokufunda komatshini kusetyenziswa inkqubo ye-EnCaption kwindlela yokusebenza engabizi mali, yokuphela kokuphela iMINNEAPOLIS, IMINNESOTA kunye noMZANTSI, MICHIGAN, ngoMeyi 11, 2020 -Iinkqubo zeMithombo yeendaba zeTightrope-umphuhlisi onguvulindlela Iqonga le-Cablecast Community Media automation- kunye neeNkqubo ze-ENCO, umvelisi ophambili kwizisombululo ezinikwe amandla ze-AI, namhlanje ubhengeze entsha ...
VITEC's Compact Hardware Encoder Ivumela abasasazi ukuba basasaze umgangatho woSasazo lwe-HD / ividiyo ye-SD
Yonke into enomxholo osasazwa ngumsasazi uyimbonakaliso yophawu lwabo kunye nelizwi emva kwalo. Umxholo kufuneka ulungile kwaye kufuneka ube nexabiso elihle kakhulu lokubonisa ukuba kubalulekile. Nangona kunjalo, ukuze oko kwenzeke, umsasazi ufuna izixhobo ezifanelekileyo ukuze abonise umxholo wabo ukuze ...
Kit Barritt ujoyina Amandla ePixel njengomphathi woqeqesho
ICambridge, e-UK, nge-1 kaMeyi 2020: Waziwa kakuhle, umphathi weprojekthi onamava kakhulu uKit Barritt ujoyine iPixel Power kwindima esandula ukwenziwa yomphathi woqeqesho. Ukuzisa ubutyebi bamava ekudaleni nasekuhambiseni uqeqesho kunye neenkqubo zokwazisa kubasasazi nakwizibonelelo zemveliso kwihlabathi liphela, uBarritt uza kuzisa uqeqesho olutsha: ngaphakathi nangaphandle; Kwisiza nakwi-intanethi. ...
Ukusasazwa kwamandla e-'Pixel Power '
ICambridge, e-UK, nge-23 ka-Epreli 2020: Amandla ePixel abamba inkqubo yokuzibandakanya yabathengi enkulu kunye noluhlu lweentlanganiso ezikwi-intanethi ezilikhulu elinanye kwezi nye kwiiveki ezintandathu ezizayo. Injongo kukuphindaphinda ezona zinto zibalulekileyo nezona zibalulekileyo kwintengiso - incoko nabathengi malunga neeprojekthi zabo kunye nendlela itekhnoloji yethu enokunceda ngayo. “Simamele ...
Inyosi ebomvu yandisa ubudlelwane obude kunye neTitanan eTV eMntla Melika
I-Red bee yandise ubudlelwane bayo obude kunye ne-TitanTV, Inc., eqhubekeka ukuhanjiswa kweenkonzo zokuFumanisa imixholo ngemethali ekumgangatho ophezulu kunye nemithombo yeendaba ecebileyo yezikhokelo zenkqubo ye-elektroniki edibeneyo. Ngobambiswano, iRed bee kunye neTitanan ibonelela ngeenkonzo kunye nesikhokelo se-VOD somgaqo we-OTA, OTT kunye ne-NextGen TV (ATSC 3.0) kubasasazi kunye nabanikezeli bomxholo eNyakatho Melika, ukudala ...
Page 1 of 6312345 » 102030...Gqibela »